I-Tremielga okanye i-torpedo fish | Ngeentlanzi
El I-tremielga intlanzi okanye i-torpedo fish, ekwabizwayo tremielgas okanye tremielgas, luhlobo oluhlala lodwa kunye nezokudada ezimbi ezihlala zifunyanwa ziphantse zangcwatywa ngokupheleleyo esantini okanye eludakeni, kushiya kuphela amehlo kunye nemiphetho ebonakalayo. Le ntlanzi ibonakaliswa kukuhlala kwayo ngokungathandabuzekiyo kunye nediski yayo eyinyama enemiphetho ejikelezileyo ebangelwa kukudibana komzimba neempiko zepectoral.
Umzimba we I-tremielga ixinezeleke ngokudakumba, kunye namaphiko emiphetho, ajikeleziweyo, adityaniswe ecaleni kwawo, apho enza idiski ethe tyaba kancinane kubume bayo bangaphambili.
Amanqwanqwa e-pelvic, nawo ajikeleziwe, avela ngaphantsi kwepeketali, kwaye ancanyathiselwe kwisiqingatha sangaphakathi somsila, esiphela ngesiphelo se-caudal esenziwe kakuhle. Kumgca ophakathi nendawo, umsila unamaphiko amabini emqolo. Inkqubo ye- Amehlo amancinci kakhulu kodwa abonakalayo, Ukuvumela ukuba ujonge indawo ekungqongileyo kunye nomzimba wakho ugqunywe ngokupheleleyo kwi-sediment.
Isiqingatha somlomo sibonisa amazinyo amancinci ahlelwe ngemigca. Ulusu luthambile, kwaye ngasemva kukho izibini zombane ivelisa ukothuka kakhulu xa i-tremielga iziva ikhathazwa, oku kukhupha, nangona kuyacaphukisa, akunabungozi emntwini. Olona luvo luqhelekileyo luhamba phakathi kwe-45 kunye ne-80 volts, nangona kwiimeko ezithile nakwiimodeli ezinkulu kakhulu banokufikelela kwi-220 volts. Kwaye neentsana ezisandul 'ukuzalwa ziyakwazi ukuvelisa umothuko malunga nee-volts ezi-4.
Banokuvelisa ukothuka kombane ngokuthanda enkosi kumalungu amabini amile okwezintso kunye nombala okhanyayo obizwa ngokuba yi "electroplast". La malungu abekwe ngaphambili kwidis, kwicala ngalinye lentloko.
Itremielga ziintlobo zemikhwa yasebusuku kwaye itya eziphilayo benthic. I-ovoviviparous kwaye ukumitha kuthatha malunga neenyanga ezilishumi kwaye inokuthwala phakathi kweembumba ezi-5 ukuya kwezingama-32, Kuxhomekeke kubukhulu bomfazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » I-Tremielga okanye i-torpedo fish